Vaovao - Hisokatra amin'ny SNIEC ny kintana faha-6 amin'ny 02 Sep 2020
140+ mpamatsy vahaolana amin'ny varotra avo lenta avy amin'ny sehatra dimy, ao anatin'izany ny fittings sy ny fitaovana fivarotana, ny famolavolana magazay, ny varotra amin'ny maso, ny haitao fivarotana marani-tsaina, ny fitaovana fampitaovana, ny kojakoja sy ny trano fandraisam-bahiny ary ny rafitra fampangatsiahana, mifaninana ary mamorona toko vaovao amin'ny antsinjarany. Mpiara-miasa marobe avy amin'ny indostria no mivory eo an-toerana hahafantatra ny fironana indostrialy, mitady mpiara-miasa ary hifanakalo hevitra momba ny firoboroboan'ny ho avy
Amin'ny maha mpiara-miasa stratejika an'ny C-STAR anao, ilay mpandraharaha mampiditra ny haingon-trano, ny fananganana ary ny fitantanana ireo fivarotana --- Chang Hong, dia efa enina in-fampirantiana. Tamin'ity taona ity, nihaona indray izahay (booth N1B46), manolotra sehatra fivarotana antsokosoko vaovao ho anao
CH dia mampihatra ny fampahalalana sy ny teknolojia BIM hahatsapany ny fampidirana karazana fananganana fivarotana varotra roa amin'ny alàlan'ny fanangonana sy ny fampidirana vokatra manan-tsaina, manome serivisy fananganana magazay samy hafa ho an'ny orinasam-barotra, manatsara ny kalitaon'ny fivarotana sy tombony ara-toekarena, manatsara ny tontolon'ny mpivarotra ary manatsara ny traikefan'ny mpanjifa. Izay nahasarika mpijery matihanina sy namana haino aman-jery maro hijanona sy hifanakalo hevitra
Mandritra izany fotoana izany dia nandefa fampielezam-peo mivantana an-tserasera roa ihany koa ny CH tamin'ny andro voalohany, nanolotra sary mahafinaritra kokoa ara-potoana ho an'ireo olona izay tsy afaka tonga eo amin'ny sehatra sy mizara ny mombamomba ny indostria.
Ny marainan'ny faha-2, teo ambany fitarihan'ny talen'ny famolavolana Ramatoa Wang Guiling sy ny Lehiben'ny injeniera Andriamatoa Wu Xinwei, dia nijery ny C-STAR 2020 tamina fampirantiana matihanina tamin'ny rahona dimy lehibe izahay, ny trano fivarotana ho an'ny mpivarotra ambaratonga voalohany, ny varavarankely voalohany fanamby amin'ny varotra, sns. Mba hianarana ny fironana farany amin'ny indostria. Ny tolakandro dia nanasa ny talen'ny R&D Andriamatoa ZhangWei, ivon'ny BIM GM Andriamatoa CuiYaoto mizara ny fangatahana BIM any amin'ny magazay ara-barotra sy ny mpivarotra ambongadiny: ny fahendren'ny tsena, manolotra fandikana matihanina sy lalina.